ILake Michigan: iimpawu, imvelaphi, izityalo nezilwanyana | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 24/12/2021 10:00 | Ukwahlulahlulahlula
El ichibi lemichigan lelinye lamachibi amakhulu amahlanu akuMntla Melika. Ingqongwe zizixeko ezininzi zaseUnited States, esinye sazo esinegama elifanayo neli chibi linomtsalane, yaye abantu abangaphezu kwezigidi ezili-12 bahlanganisana kulo.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuze sikuxelele yonke into ekufuneka uyazi malunga neLake Michigan, iimpawu zayo kunye nokubaluleka.
2 Iimpawu zeLake Michigan
3 Imozulu yeLake Michigan
4 Iintyatyambo, izilwanyana kunye nejoloji
5 Iintsomi zaseLake Michigan kunye nezinto ezinomdla
ILake Michigan yinxalenye yeGreat Lakes ekudibaneni kweendlela zaseUnited States naseCanada. Kodwa ingaphakathi ngokupheleleyo kummandla waseUnited States. Izifundo zakudala ziye zabonisa ukuba Eli chibi lasekwa malunga neminyaka eyi-13.000 eyadlulayo, emva kwexesha lokugqibela lomkhenkce.
Njengoko umkhenkce unyibilika, uthotho lwezitya ezinkulu ezizaliswe ngamanzi zashiywa kwindawo yazo, ezi zitya, kunye nezinye izinto ezingamanzi, zaqala kweli chibi, njengoko kwenza ezinye ezine kwiqela.
I-Lake Michigan lichibi lesibini ngobukhulu kwiqela le-Great Lakes; Ndazibona sele ndidityaniswa neChibi iHuron kwiStraits of Mackinac, apho amanzi alo edibana khona ukuze enze amanzi amaninzi aziwa njengeLake Huron, eMichigan. Kuyafaneleka ukukhankanya ukuba i-strait yayiyindlela ebalulekileyo yokurhweba ngoboya kumaxesha amandulo.
Ubunzulu beli chibi babonwa okokuqala ngexesha lohambo ngo-1985, olwalukhokelwa sisazinzulu seYunivesithi yaseWisconsin ogama linguJ. Val Klump; ikwazile ukusebenzisa into engaphantsi kwamanzi ukwenza uphando ukufumanisa iimitha ezingama-281.
Iimpawu zeLake Michigan
Iimpawu zeLake Michigan yizo eziyahlula kwamanye amachibi emhlabeni, ngezi mpawu unokuqonda iinkalo ezininzi ezisisiseko zechibi, phakathi kwamachibi amakhulu akwindawo yesibini kwisikali eMelika.
Ngale ndlela, kunokuthiwa iLake Michigan inezi zinto zilandelayo:
Lichibi elibekwe ngokupheleleyo eUnited States kwaye Ikummandla weGreat Lakes.
Ingqongwe ngabantu baseMelika eIndiana, eIllinois, eWisconsin naseMichigan.
Iquka indawo ye-57.750 yeekhilomitha zeekhilomitha, kunye nokuphakama kweemitha ezili-176 kunye nobunzulu bamanzi be-281 yeemitha.
Imalunga neekhilomitha ezingama-494 ubude neekhilomitha ezili-190 ububanzi.
Inoluhlu lweziqithi ezingaphakathi elizweni ezibizwa ngokuba: iBeaver, iNorth Manitou, iSouth Manitou, iWashington, kunye neRock.
Ifumana amanzi kwimilambo emininzi kwaye idibanise noMlambo iSaint Lawrence kwisitya sayo.
Izixeko ezininzi zigxile kunxweme lwayo, kodwa ezona zibalaseleyo yiChicago, iMilwaukee kunye neMuskegon.
Ukuloba kwezemidlalo kunye nezorhwebo kuqhutyelwa echibini, i-trout kunye nezinye iisampuli ziyabanjwa, kwaye i-salmon ifakwe.
Yafunyanwa ngo-1634 ngumhloli waseFransi uJean Nicolet.
Kweli chibi kwavela iindunduma zesanti ezigqunywe ngengca eluhlaza kunye namatsheri aselwandle, nasekupheleni kwehlobo amanzi apha apholile kwaye ayabonakala, kwaye ubushushu bumnandi.
Kukho amatye ePetoskey eLake Michigan. Ezi zizikhumbuzo ezintle ezivela echibini. Agqalwa njengamatye asemthethweni kweli chibi. Zihombise kakhulu. Zinenkangeleko yeefosili kwaye zikrolwe ngokucokisekileyo. Zizodwa kwindawo kwaye zingaphezulu kwe-3. Ikhulu elinamashumi amahlanu eminyaka ubudala.
Imozulu yeLake Michigan
Eli lichibi elihle kwaye kuyacetyiswa ukuba ulindwendwele ngakumbi phakathi kukaJuni noSeptemba, kuba imozulu ishushu kwaye inamafu ngokuyinxenye kwezi ntsuku, nangona ubusika bubanda kakhulu. Amaqondo obushushu kule ndawo ahluka phakathi kwe-7 ° C kunye ne-27 ° C; kwaye ezi xabiso kunqabile ukuba zitshintshe kakhulu, ukuba ziyenzeka, aziyi kufikelela -14 ° C okanye zidlule kwi-30 ° C. Kodwa inyaniso yangoku yahlukile, kuba amaqondo obushushu asezantsi -45 ° C aqinisekisiwe, nto leyo ebangela ukuba amanzi eLake Michigan aba ngumkhenkce.
Amanzi ayo ajongana nento ebizwa ngokuba yimpembelelo yechibi: ebusika, umoya ubangela ukuba umoya ube ngumphunga uvelise ikhephu, kodwa kwamanye amaxesha onyaka, xa efunxa ubushushu aze apholise umoya ehlotyeni nasekwindla, alawula ubushushu. Oku kuvumela ukubonakala kwamabhanti eziqhamo, elixesha apho isixa esikhulu seziqhamo sinokuvunwa ukuya kwimimandla esemazantsi.
Iintyatyambo, izilwanyana kunye nejoloji
Njengamachibi amaninzi, i-geological feature yeLake Michigan kukuba kukho ukudakumba emhlabeni, apho amanzi aqokelelwa kwimilambo emininzi; Ukongeza kwinani leeminerali ezifana nentsimbi, ezi zimbiwa kamva zathunyelwa kwiiNtaba zeAppalachian. Ukusuka kwiindawo ezivelisa amalahle.
Ubume bomhlaba kule ndawo buwenza utyebe kwimveliso yokutya kuba uchume kakhulu kwaye unamahlathi amakhulu. I-Lake Michigan ibonakaliswe kubukho bemigxobhozo ehlaselwe ngamanzi; kukho iingca ezinde, iisavanna, neengqumba zentlabathi ezinde, zonke ezo zenza iindawo zokuhlala ezibalaseleyo zezilwanyana zasendle.
Ngale ndlela, ifauna yayo imelwe ziintlanzi ezifana ne-trout, isalmon, i-snook kunye ne-pike perch, zonke zilungele imisebenzi yokuloba kwezemidlalo. Kukwakho ne-crawfish, iziponji, izibane zolwandle, amaxhalanga kunye nezinye iintlobo ezininzi zeentaka ezinjenge amadada, amarhanisi, amagwababa, amadada, amaxhalanga, ookhetshe nokunye, njengoko eli chibi linobutyebi bezilwanyana zasendle.
Iintsomi zaseLake Michigan kunye nezinto ezinomdla
Ngokutsho kwe-arhente yokuhamba kunye noLondolozo, iLake Michigan ijikelezwe yimbali efana neLoch Ness eScotland, apho kuthiwa kukho i-monster enoluhlu lweempawu ze-prehistoric eziye zafunyanwa zinoxanduva lokubonelela ngeenkonzo zabakhenkethi kulo mmandla. ukususela ngo-1818.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba le monster enkulu efana nenyoka eneneni, njengoko ichaziwe, ayiyonyani, kuba akukho mntu uye wasondela kuyo, okanye akukho mntu uyifotayo ngokuqinisekileyo, ke oku kuthathwa njengenxalenye yentsomi yokuba abahlali ummandla ubaxiwe ukutsala ukhenketho.
Ngaba ucinga ukuba kukho izilo eLake Michigan okanye hayi, eli lithuba elinomdla lokudibana naye kwaye uthathe iholide, kuba unako ukuqubha emanzini ayo, ukonwabela usuku lokuphumla ehlathini okanye ufunde nje ngalo. Kubathandi bekhephu nobusika, le ndawo iba ngumkhenkce ngeli xesha lonyaka, ukuze ukwazi ukuziqhelanisa nemidlalo yasebusika enje ngokutyibiliza ekhephini.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neLake Michigan kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Zemozulu » Ukwahlulahlulahlula » ILake Michigan